ဆံပင်ကျွတ်တော့မည်ဟု ကြိုသိနိုင်သော ဦးရေပြားပူခြင်းကို ဖြေရှင်းနိုင်သော နည်းလေး - Barnyar Barnyar
March 4, 2022 အလှအပရေးရာ 0
ခေါင်းဖြီးလို့ ဆံပင်တွေကျွတ်လာရင် စိတ်ညစ်ရသလို၊ ဆိုင်မှာခေါင်းသွားလျှော်ရင်လဲအစ်မဆံပင်တွေကျွတ်တယ်နော် ပြောရင် စိတ်ပိုညစ်ရပါတယ်။ အမှတ်မထင်လိုင်းပေါ်မှာ တွေ့တဲ့ဆေးနည်းလေးနဲ့ စမ်းလုပ်ကြည့်တာ အဆင်ပြေလို့ ကိုယ့်လိုစိတ်ညစ်နေတဲ့သူတွေ အတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ကြက်သွန်နီ ဆေးဘက်ဝင်တာသိပေမဲ့ ကြက်သွန်နီကိုကြိတ်ပြီး ခေါင်းပေါ်လိမ်းတဲ့အခါ ကြက်သွန်စိမ်းနံ့ပျောက်ဖိုိ့ တော်တော်ခေါင်းလျှော်ယူရတာ ကျွန်မအတွက်သိပ်အဆင်မပြေ ဖြစ်ရပါတယ်။ ဒီနည်းလေးကတော့ တော်တော်အဆင် ပြေပါတယ်။
ဆန်ကိုပန်ကန်လုံးလေးနဲ့ တစ်ခွက်ယူပါ။ ဆန်ကိုထမင်းချက်သလိုပဲ နှစ်ကြိမ်လောက် ဖွဖွလေးဆေးပါ. ဆေးထားတဲ့ဆန်ကို နှစ်နာရီလောက် စိမ်ထားလိုက်ပါ ရေနည်းနည်းနဲ့ပဲ စိမ်ပါ.
ကြက်သွန်နီကို အခွံခွာပါ ကြက်သွန်နီကို ရှစ်စိပ်စိပ်လိုက်ပါ (ကျွန်မကတော့ ဆန်ပန်းကန်လုံး တစ်ခွက်ဆို ကြက်သွန်နီနှစ်လုံး သုံးပါတယ်) ဆန်နဲ့ကြက်သွန်စိပ်ထားတာ ရောလိုက်ပါ ရေနည်းနည်း ထပ်ထည့်ပေးပါ… မီးဖိုပေါ်မှာ ပွက်ပွက်ဆူအောင် မွှေပေးပါ ဆန်နည်းနည်း ကျေတဲ့အထိထားပါ ..(ဆန်ပြုတ်အဆင့် မရောက်ပါ)
အဲ့လောက်ဆို ..ရေစစ်ထဲကို ထည့်ပြီး အရည်ညစ်ယူပါ။ ရေကုန်သွားအောင် ညှစ်ပါ.. ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်သိမ်းပြီး တစ်ပတ်လောက် ထားသုံးလို့ရပါပြီ…
ဆန်မှာ ပါဝင်သော အာဟာရဓာတ်များနှင့် ကြက်သွန်နီမှာ ပါဝင်သော ဓာတ်များကြောင့် ဆံပင်အတွက် အကျိုးပြု ပါတယ်။ ပြုတ်ထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကြက်သွန်နံ့လဲ မနံ့ပါဘူး။
ဘာတွေ ထူးခြားလာလဲ ဆိုတော့..
ဆံပင်ကျွတ်တာ လုံရပ်သွားပြီး အမြဲဦးရေပြားပူနေတတ်တဲ့ ကျွန်မ ဦးခေါင်းအရေပြားလဲ သိသိသာသာ အပူလျော့ကျလာပါတယ်။ ဆံပင်ကို သိသိသာသာ အားပေးစေပါတယ် ။ ဘောက်ရှိတဲ့သူမို့ သံပရာ(သို့) သံပရိုသီးအရည် ထည့်ပါတယ်။ဘောက်လဲတက်တာလျှော့ကျသွားပါတယ်။
ခေါင်း မလျှော်ခင် ဆေးရည်ကို ယူပြီး ဦးရေပြား အထိ လိမ်းပါတယ်။ ဆံပင်ပျော့ချင် ရင်တရော်ကင် ပွန်းထည့်ပါ၊ ဘောက်ပျောက်ရင်ချင်ရင် သံပရာသီး အရည် ညှစ်ထည့်ပါ။
ဆံပင်အရော င်တောက်ချင်ရင် သံလွင်ဆီ၊အုန်းဆီတစ်ခုခုကို ထည့်ပါ။ (15) မိနစ်လောက်ဦးရေပြားကော၊ဆံပင်ထိပ်ဖျားတွေအထိပါလိမ်းပေးပြီးခဏနှိပ်ပေးရပါတယ်။
ကျွန်မကတော့ Hair Cap နဲ့ဆယ်မိနစ်လောက်အုပ်ပြီးခဏထားလိုက်ပါတယ်။ပြီးမှ ရှန်ပူအပျော့စားနဲ့ခေါင်းလျှော်ပါတယ်။ ဘေးဥပဒ်မရှိပဲသဘာဝနည်းဖြစ်တာကြောင့်မည်သူမဆိုအသုံးတည့်မယ်ယူဆပါတယ်။
ဆံပငျကြှတျတော့မညျဟု ကွိုသိနိုငျသော ဦးရပွေားပူခွငျးကို ဖွရှေငျးနိုငျသော နညျးလေး
ခေါငျးဖွီးလို့ ဆံပငျတှကြှေတျလာရငျ စိတျညဈရသလို၊ ဆိုငျမှာခေါငျးသှားလြှျောရငျလဲအဈမဆံပငျတှေကြှတျတယျနျော ပွောရငျ စိတျပိုညဈရပါတယျ။ အမှတျမထငျလိုငျးပျေါမှာ တှတေဲ့ဆေးနညျးလေးနဲ့ စမျးလုပျကွညျ့တာ အဆငျပွလေို့ ကိုယျ့လိုစိတျညဈနတေဲ့သူတှေ အတှကျ မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။
ကွကျသှနျနီ ဆေးဘကျဝငျတာသိပမေဲ့ ကွကျသှနျနီကိုကွိတျပွီး ခေါငျးပျေါလိမျးတဲ့အခါ ကွကျသှနျစိမျးနံ့ပြောကျဖိုိ့ တျောတျောခေါငျးလြှျောယူရတာ ကြှနျမအတှကျသိပျအဆငျမပွေ ဖွဈရပါတယျ။ ဒီနညျးလေးကတော့ တျောတျောအဆငျ ပွပေါတယျ။
ဆနျကိုပနျကနျလုံးလေးနဲ့ တဈခှကျယူပါ။ ဆနျကိုထမငျးခကျြသလိုပဲ နှဈကွိမျလောကျ ဖှဖှလေးဆေးပါ. ဆေးထားတဲ့ဆနျကို နှဈနာရီလောကျ စိမျထားလိုကျပါ ရနေညျးနညျးနဲ့ပဲ စိမျပါ.
ကွကျသှနျနီကို အခှံခှာပါ ကွကျသှနျနီကို ရှဈစိပျစိပျလိုကျပါ (ကြှနျမကတော့ ဆနျပနျးကနျလုံး တဈခှကျဆို ကွကျသှနျနီနှဈလုံး သုံးပါတယျ) ဆနျနဲ့ကွကျသှနျစိပျထားတာ ရောလိုကျပါ ရနေညျးနညျး ထပျထညျ့ပေးပါ… မီးဖိုပျေါမှာ ပှကျပှကျဆူအောငျ မှပေေးပါ ဆနျနညျးနညျး ကတြေဲ့အထိထားပါ ..(ဆနျပွုတျအဆငျ့ မရောကျပါ)
အဲ့လောကျဆို ..ရစေဈထဲကို ထညျ့ပွီး အရညျညဈယူပါ။ ရကေုနျသှားအောငျ ညှဈပါ.. ရခေဲသတ်ေတာထဲထညျ့သိမျးပွီး တဈပတျလောကျ ထားသုံးလို့ရပါပွီ…
ဆနျမှာ ပါဝငျသော အာဟာရဓာတျမြားနှငျ့ ကွကျသှနျနီမှာ ပါဝငျသော ဓာတျမြားကွောငျ့ ဆံပငျအတှကျ အကြိုးပွု ပါတယျ။ ပွုတျထားတာ ဖွဈတဲ့အတှကျ ကွကျသှနျနံ့လဲ မနံ့ပါဘူး။
ဘာတှေ ထူးခွားလာလဲ ဆိုတော့..
ဆံပငျကြှတျတာ လုံရပျသှားပွီး အမွဲဦးရပွေားပူနတေတျတဲ့ ကြှနျမ ဦးခေါငျးအရပွေားလဲ သိသိသာသာ အပူလြော့ကလြာပါတယျ။ ဆံပငျကို သိသိသာသာ အားပေးစပေါတယျ ။ ဘောကျရှိတဲ့သူမို့ သံပရာ(သို့) သံပရိုသီးအရညျ ထညျ့ပါတယျ။ဘောကျလဲတကျတာလြှော့ကသြှားပါတယျ။
ခေါငျး မလြှျောခငျ ဆေးရညျကို ယူပွီး ဦးရပွေား အထိ လိမျးပါတယျ။ ဆံပငျပြော့ခငျြ ရငျတရျောကငျ ပှနျးထညျ့ပါ၊ ဘောကျပြောကျရငျခငျြရငျ သံပရာသီး အရညျ ညှဈထညျ့ပါ။
ဆံပငျအရော ငျတောကျခငျြရငျ သံလှငျဆီ၊အုနျးဆီတဈခုခုကို ထညျ့ပါ။ (15) မိနဈလောကျဦးရပွေားကော၊ဆံပငျထိပျဖြားတှအေထိပါလိမျးပေးပွီးခဏနှိပျပေးရပါတယျ။
ကြှနျမကတော့ Hair Cap နဲ့ဆယျမိနဈလောကျအုပျပွီးခဏထားလိုကျပါတယျ။ပွီးမှ ရှနျပူအပြော့စားနဲ့ခေါငျးလြှျောပါတယျ။ ဘေးဥပဒျမရှိပဲသဘာဝနညျးဖွဈတာကွောငျ့မညျသူမဆိုအသုံးတညျ့မယျယူဆပါတယျ။